Mahad Salaad oo xogo hor-dhac ah ka helay kiiska Ikraan | KEYDMEDIA ENGLISH
Mahad Salaad oo xogo hor-dhac ah ka helay kiiska Ikraan
Mahad Salaad, wuxuu 22 July 2021, sheegay in qorshaha khaarijinta Ikraan Tahliil ay maleegeen Fahad Yaasiin iyo Kulane Jiis, isla-markaana uu fuliyay Taliyahii Nabad Sugidda Gobolka Banaadir xilligaas Yaasiin Farey oo hadda ah xildhibaan ka tirsan Golaha Shcabka.
MUQDISHO, Soomaaliya – Sida ay sheegayaan xogo sirdoon oo soo gaaray xafiiska war-qabadka Keydmedia, Agaasimaha Hay’adda Nabad-sugidda iyo Sirdoonka Qaranka, Mahad Maxamed Salaad, ayaa billowgii todobaadkaan daah-furay baarista kiiska Ikraan Tahliil.
Ilo loo qaateen ah oo dhinacyo kala duwan ah ayaa KON u xaqiijiyay in Agaasimaha Hay’adda uu wareysiyo kala duwan la yeeshay saraakiisha hay’adda ee uu quseeyo kiiska maqanad Ikraan oo ay nolol iyo geeri ugu danbeysay bishaan oo kale sanadkii hore.
Askar ka tirsan hay’adda, saqaale caafimaad, wadayaal gaadiid iyo shaqsiyaad ka baxsan NISA, ayay xogaha aan helnay muujinayan inuu la kulmay Mahad Salaad, kuwaasoo uu wax ka weydiiyay kiiska, hayeeshee ma cadda inta ay la egtahay xogta uu helay ilaa hadda.
Dhanka kale, war aysan si rasmi ah u xaqiijin karin KON, ayaa sheegaya in Agaasimuhu uu gacanta ku hayo xogo la xariira gaari Aambalaas ah oo 26 Juun 2021, qof meyd ah ka qaaday godka Jilicow, kaasoo caasimadda looga saaray dhanka Shabeellaha hoose.
“Mahad wuxuu durba hayaa caddeyn ah in Ikraan la dilay fiidnimadii 26 Juun, kadibna meydkeeda lagu aasay agagaarka degmada Af-gooye, dhimashadeeda ka hor, waxaa gaarigiisa godka jilicow ku geeyay nin la yiraahdo Wadne-qabad”, ayuu yiri sarkal ka tirsan NISA, oo naga codsaday in aannan magaciisa baahin.
Ikraan Tahliil oo dhanka ammaanka internet-ka u qaabilsanayd NISA, ayaa markii dad ugu dambeysay lagu arkay muuqaal ay duubtay CCTV iyadoo gurigeeda ka baxday 26-ka juun sanadkii hore, xilli habeen ah abaare 8:00 pm iyadoo raaceysa gaari Toyota Hulux ah.
Sidoo kale, Agaasmiye ku-xigeynkii hore ee Hay’adda Nabad-sugidda Gen Cabdalla Cabdalla, oo ka mid ah dadka sida dhow ula socda dhaqdhaqaaqa taliska NISA, ayaa dhankiisa sheegay in Fahad Yaasiin, uu masuul ka ahaa dilkii AUN, Ikraan Tahliil Faarax.
Ikraan 1998 ayay dhalatay, sida muuqata waa Gabar aad u da’yar, balse lahayd aqoon iyo xirfad sare, iyadoo soo qabatay shaqooyin culus, oo ay kamid tahay inay noqotay madax ammaanka Internet-ka hay’adda NISA iyo gacan-yaraha qaaska Eng Yariisow.
Dilkii AUN, Eng Yariisow kadib ayay aadday UK oo aqoon-korarsi dhanka Sirdoonka u aaday, waxaa dalka dib ugu soo celiyay Fahad Yaasiin iyo Kulane Jiis oo u sameeyay balan-qaad been ah oo ay kusoo xero-gelinayeen, si ay u khaariyaan maadaama ay heysay xogo iyaga halis ku ah.